ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ခွဲမွေးရတတ်လဲ ? - For her Myanmar
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ခွဲမွေးရတတ်လဲ ?
အရေးပေါ် ခွဲမမွေးရဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းကတော့….
ယောင်းတို့ရေ … ဘယ်သူကတော့ ကလေးမမွေးနိုင်လို့ အရေးပေါ်ခွဲမွေးလိုက်ရတယ်။ ဆိုတာမျိုး ကြာဖူးမှာပေါ့နော်။ အရေးပေါ်ဆိုမှတော့ ကြိုတင်မစီစဉ်ထားဘဲနဲ့ ရိုးရိုးမွေးရင်းကနေ လိုအပ်ချက်အရ အရေးပေါ်ခွဲခန်းဝင်ပြီး မွေးလိုက်ရတာမျိုးပါ။ ရိုးရိုးမွေးဖို့ စိတ်ရောလူပါ ပြင်ဆင်ထားပြီးမှ ခွဲမွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကြီး တော်တော်များများမလိုချင်ကြပါဘူး။
တချို့ဆို ကိုယ့်မှ ဘာလို့ခွဲမွေးလိုက်ရတာလဲ? တကယ်ရောလိုအပ်လို့လားလို့ မေးကြပါတယ်။ ခု ဘယ်လိုအနေအထားတွေလဲ ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁) ကလေး နှလုံးခုန်သံမမှန်လို့။
ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်းနှေးခြင်းကို မွေးဖွားခါနီးအချိန်မှာ ဆရာဝန်တွေက အမြဲ နားထောင်ပေးစမ်းသပ်ပေးပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း မူမမှန်တာ တွေ့ပြီဆိုရင် ဒါဟာ ကလေးငယ် ဗိုက်ထဲမှာမွန်းနေ ၊ ကျပ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းနေတာမို့ ကလေးငယ် အသက်အန္တရာယ်ကို စိတ်ပူလို့ အရေးပေါ်ခွဲမွေးရတာပါ။
၂) အမေ ညှပ်ရိုးကျဉ်းလို့။
မွေးဖွားနေတဲ့ အမေဟာ မွေးဖွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ ညှပ်ရိုးကျဉ်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးက ထွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့် မွေးဖွားတဲ့အချိန်ဟာ လိုအပ်တာထက်ကြာမြင့်နေပြီဆိုရင် CEPHALOPELVIC disproportion လို့သတ်မှတ်ပြီး အရေးပေါ်ခွဲမွေးဖို့ ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ ဒါကို ဗိုက်အပ်ထားမယ်ဆိုရင် ကြိုသိပြီး အတန်အသင့် ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Related article >>> နို့တိုက် မေမေတွေ အားရှိအောင် စားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၈ မျိုး
၃) မွေးဖွားချိန် တအားကြာနေလို့။
ကလေးမွေးဖွားဖို့ ဆိုတာ ကလေးထွက်ဖို့အပေါက်ဝ သားအိမ်ခေါင်းက လုံလောက်အောင်ကျယ်ရမှာဖြစ်သလို သားအိမ်ကလည်း အားကောင်းကောင်းနဲ့ ညှစ်ချရမှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မှာ သားအိမ်က မညှစ်လို့ဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ခေါင်းက မပွင့်လို့ဖြစ်ဖြစ် မွေးဖွားချိန်ကြာပြီဆိုရင် အရေးပေါ်ခွဲမွေးရတတ်ပါတယ်။
၄) ကလေးအနေအထား မမှန်လို့။
ရိုးရိုးမွေးဖို့ဆိုရင် ကလေးအနေအထားဟာ မွေးလမ်းကြောင်းဘက်ကို ခေါင်းကဦးတည်တဲ့ခေါင်းပိုင်းဖြစ်ရမှာပါ။ ကလေးဟာ ကန့်လန့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆုံပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဆို ရိုးရိုးမွေးဖို့ ခက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးအနေအထား ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကို ကိုယ်ဝန်ပုံမှန်အပ်ခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်ခွဲမွေးရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Related article >>> ကလေးငယ်တို့ အမြန်ဆုံး အိပ်ပျော်သွားစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
ကလေးအချင်းဟာ ကလေးမွေးပြီးနောက်မှ ကလေးအချင်းကျရပါတယ်။ ကလေး မွေးလမ်းကြောင်းက မဆင်းသေးဘဲ သွေးတွေသွန်ပြီး ကလေးအချင်းစောကွာတဲ့လက္ခဏာပြမယ်ဆိုရင် ကလေးငယ် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်မှာစိုးလို့ ချက်ချင်း အရေးပေါ်ခွဲမွေးရနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်ခွဲမွေးရနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိပေမဲ့ အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ခွဲမွေးတာကို ကြောက်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ကို အစောဆုံးအပ်ပြီး ဆေးရုံမှာ မွေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဗိုက်ဗိုက်တို့ ရှောရှောရှူရှူမွေးနိုင်ကြပါစေ ဆုတောင်းပေးရင်း
အရေးပျေါ ခှဲမမှေးရဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးကတော့….
ယောငျးတို့ရေ … ဘယျသူကတော့ ကလေးမမှေးနိုငျလို့ အရေးပျေါခှဲမှေးလိုကျရတယျ။ ဆိုတာမြိုး ကွာဖူးမှာပေါ့နျော။ အရေးပျေါဆိုမှတော့ ကွိုတငျမစီစဉျထားဘဲနဲ့ ရိုးရိုးမှေးရငျးကနေ လိုအပျခကျြအရ အရေးပျေါခှဲခနျးဝငျပွီး မှေးလိုကျရတာမြိုးပါ။ ရိုးရိုးမှေးဖို့ စိတျရောလူပါ ပွငျဆငျထားပွီးမှ ခှဲမှေးလိုကျရတယျဆိုတာကွီး တျောတျောမြားမြားမလိုခငျြကွပါဘူး။
တခြို့ဆို ကိုယျ့မှ ဘာလို့ခှဲမှေးလိုကျရတာလဲ? တကယျရောလိုအပျလို့လားလို့ မေးကွပါတယျ။ ခု ဘယျလိုအနအေထားတှလေဲ ဆိုတာ ပွောပွခငျြပါတယျ။
၁) ကလေး နှလုံးခုနျသံမမှနျလို့။
ကလေးနှလုံးခုနျနှုနျး မွနျခွငျးနှေးခွငျးကို မှေးဖှားခါနီးအခြိနျမှာ ဆရာဝနျတှကေ အမွဲ နားထောငျပေးစမျးသပျပေးပါတယျ။ နှလုံးခုနျနှုနျး မူမမှနျတာ တှပွေီ့ဆိုရငျ ဒါဟာ ကလေးငယျ ဗိုကျထဲမှာမှနျးနေ ၊ ကပျြနနေိုငျတယျဆိုတာကို ရညျညှနျးနတောမို့ ကလေးငယျ အသကျအန်တရာယျကို စိတျပူလို့ အရေးပျေါခှဲမှေးရတာပါ။
၂) အမေ ညှပျရိုးကဉျြးလို့။
မှေးဖှားနတေဲ့ အမဟော မှေးဖှားတဲ့လမျးကွောငျးမှာရှိတဲ့ ညှပျရိုးကဉျြးတာဖွဈဖွဈ၊ ကလေးက ထှားတာပဲဖွဈဖွဈကွောငျ့ မှေးဖှားတဲ့အခြိနျဟာ လိုအပျတာထကျကွာမွငျ့နပွေီဆိုရငျ CEPHALOPELVIC disproportion လို့သတျမှတျပွီး အရေးပျေါခှဲမှေးဖို့ ပွငျဆငျကွရပါတယျ။ ဒါကို ဗိုကျအပျထားမယျဆိုရငျ ကွိုသိပွီး အတနျအသငျ့ ရှောငျရှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Related article >>> နို့တိုကျ မမေတှေေ အားရှိအောငျ စားသငျ့တဲ့ အစားအစာ ၈ မြိုး
၃) မှေးဖှားခြိနျ တအားကွာနလေို့။
ကလေးမှေးဖှားဖို့ ဆိုတာ ကလေးထှကျဖို့အပေါကျဝ သားအိမျခေါငျးက လုံလောကျအောငျကယျြရမှာဖွဈသလို သားအိမျကလညျး အားကောငျးကောငျးနဲ့ ညှဈခရြမှာပါ။ ဒီလိုဖွဈစဉျမှာ သားအိမျက မညှဈလို့ဖွဈဖွဈ သားအိမျခေါငျးက မပှငျ့လို့ဖွဈဖွဈ မှေးဖှားခြိနျကွာပွီဆိုရငျ အရေးပျေါခှဲမှေးရတတျပါတယျ။
၄) ကလေးအနအေထား မမှနျလို့။
ရိုးရိုးမှေးဖို့ဆိုရငျ ကလေးအနအေထားဟာ မှေးလမျးကွောငျးဘကျကို ခေါငျးကဦးတညျတဲ့ခေါငျးပိုငျးဖွဈရမှာပါ။ ကလေးဟာ ကနျ့လနျ့ဖွဈဖွဈ ၊ ဆုံပိုငျးဖွဈဖွဈဆို ရိုးရိုးမှေးဖို့ ခကျနိုငျပါတယျ။ ကလေးအနအေထား ပုံမှနျဟုတျမဟုတျကို ကိုယျဝနျပုံမှနျအပျခွငျးဖွငျ့ အရေးပျေါခှဲမှေးရခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
Related article >>> ကလေးငယျတို့ အမွနျဆုံး အိပျပြျောသှားစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးမြား
ကလေးအခငျြးဟာ ကလေးမှေးပွီးနောကျမှ ကလေးအခငျြးကရြပါတယျ။ ကလေး မှေးလမျးကွောငျးက မဆငျးသေးဘဲ သှေးတှသှေနျပွီး ကလေးအခငျြးစောကှာတဲ့လက်ခဏာပွမယျဆိုရငျ ကလေးငယျ အောကျဆီဂငျြပွတျတောကျမှာစိုးလို့ ခကျြခငျြး အရေးပျေါခှဲမှေးရနိုငျပါတယျ။
အရေးပျေါခှဲမှေးရနိုငျတဲ့ အခွားအကွောငျးရငျးတှလေညျး ရှိပမေဲ့ အဖွဈမြားတဲ့အကွောငျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အရေးပျေါခှဲမှေးတာကို ကွောကျလို့ အတတျနိုငျဆုံးရှောငျခငျြတယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျကို အစောဆုံးအပျပွီး ဆေးရုံမှာ မှေးတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
ဗိုကျဗိုကျတို့ ရှောရှောရှူရှူမှေးနိုငျကွပါစေ ဆုတောငျးပေးရငျး
Tags: baby, c section, Health, Pregnancy, To my sister, women
၂၀၁၉ ချစ်သူများနေ့ညမှာ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ Singles' Night Event
EQ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) သွယ်
မယ်တင် (ဆေး-၁) February 19, 2019
ညိုမည်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပန်းနုသွေးခြယ်လာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေ သုံးကြည့်ပါ။
Hnin Ei Oo June 11, 2019